Waa maxay u jeedka kulamada uu wado RW Xamse? | KEYDMEDIA ENGLISH
Waa maxay u jeedka kulamada uu wado RW Xamse?
Xamsa wuxuu hore u soo noqday Guddoomiyaha Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Jubaland (2019-2020); la-taliye sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee DF (2015-2019), iyo la-taliye sare oo dhinaca maamulka ah Duqii Muqdisho (2014-2015).
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa wada kulamadii ugu danbeeyay oo uu ku doonayo karkarinta sidii uu ku heli lahaa ansixinta Golayaasha Baarlamaanka 11-aad ee JFS oo aan wali la hor geyn.
RW Xamasa wuxuu xalay guryahooda ku booqday, Madaxweynayaashii hore ee dalka Sharif Sheekh Axmed, Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre, kuwaasoo uu weydiistay in ay kala shaqeeyaan sidii uu ku heli lahaa codad buuxa.
Xamse ayaa hore ula soo kulmay Guddoomiyayaasha Golayasha Baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi, isagoo kala hadlay sidii ay ugu gacansiin lahaayeen inuu helo kalsoonida xubnaha labad Aqal ee Baarlamaanka.
Sidoo kale, Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu kulamo kala duwan la qaatay xildhibaanadda Barlamaanka JFS, kuwaasoo uu ka dalbaday in ay siinayaan codka kalsoonida marka uu horyimaado Golayaasha, waxayna u ballan qaadeen wada- shaqayn wanaagsan.
Arbacadii shalay ayuu qorshuhu ahaa in Baarlamaanka Soomaaliya la hor geeyo Ra’iisul Wasaaraha Magacaaban si uu ansixinta wakiillada shacabka u helo, hayeeshee, kulankaas ayaa baaqday kadib markii uu dheeraaday xilligii loo qorsheeyay socdaalka MW Xasan.
15 June 2022, Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa Ra’iisul Wasaaraha 21-aad ee Dowladda Federaalka Soomaaliya u magacaabay Xamse Cabdi Barre, oo ka mid ah xubnaha Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka – UPD.